Umshini Wokuhlanza Ibhodlela, Umshini Wokugeza Ibhodlela - Micvd.com
NPACK Abahlanza amabhodlela asetshenziselwa ukukhipha uthuli nezinye izinhlayiya ezincane kusuka engilazini, insimbi, nasemabhodleleni epulasitiki ekuwahlanza ngaphambi kokufaka amabhodlela. Lokhu kungcoliswa kuvame ukuqongelela ebhodleleni ngenkathi kuhanjiswa noma kugcinwa, futhi kufanele kususwe ukuhlinzeka ngebhodlela elihlanzayo. Ngaphambi kokuba kugcwaliswe, iziqukathi zidluliswa ngesihenqo se-vortex se-ionized air eyenziwe sakhiwe ibhendi yomoya. I-ionized vortex ekhiqizwa ingathathi hlangothi icala le-tuli elibhekene nokuheha uthuli nokunye okulahlwa phansi kweziqukathi ezivumela ukuhlanzwa kalula kwebhodlela. Amakhanda ethu aklanyelwe ngokukhethekile angena emigqonyeni bese kuqhuma umoya olicwengekileyo ocolile. I-vacuum isetshenziswa ngasikhathi sinye ukuze kususwe i-particle ekhululiwe, ihlanza ibhodlela. Lo doti ubese uthunyelwa esikhwameni sokuqoqa ngemuva kwabahlanza amabhodlela noma uqondiswe ohlelweni lwakho lokukhipha izikhungo ukuze ulahlwe.
Imishini yethu yokuhlanza yenzelwe ukuthi kugxilwe ekuguquguqulweni, ekusebenzeni ngezimo ezihlukene kanye nokulula. Izakhi zemishini zomshini wethu wokuhlanza amabhodlela zivumela ukwakheka kwezinhlobo nosayizi eziningi ukuze kuqhutshwe ngokushintsha okulula, kusetshenziswa izingxenye ezimbalwa zokushintsha noma akukho. Izilawuli zokuthinta zesikrini ze-PLC ezisezingeni eliphakeme kuma-rinsers ethu zinikeza amandla okugcina izinhlelo eziningi kusilawuli se-PLC, futhi zinciphise izikhathi zokushintsha. Abahlanza amabhodlela nezilungiselelo zokufaka izikhonkwane bahlelwe kalula futhi basindiswa ngemodi yokusetha okuzenzakalelayo yethu, okwenza ukuthi izinguquko zokuhlanza amabhodlela zenziwe ngokushesha nangaphandle kwamandla.
Imikhiqizo yokunakekelwa komuntu siqu
Umshini Wokugeza Amanzi Wamabhodlela Ozenzakalelayo
Lo mshini wakhiwe ngetafula elijika, isiteshi sokudlulisa amabhodlela, umshini u-oda ibhodlela kulayini owodwa, ulilethe emshinini wokuwasha. Lo mshini ungagcina ibhodlela, uphuze ibhodlela, futhi ushintshe indlela yokugeleza kwebhodlela.
Kusetshenziselwa ibhodlela lengilazi, kungaxhunyaniswa nomshini wokugcwalisa, kungenza inqubo yokugeza-ukugcwalisa-iqhubeke ngokuzenzakalelayo. Ibhodlela okufanele ligezwe lidluliswa nge-poker, bese lingena kwisilinda ngezikhathi ezithile, okokuqala, ithuluzi le-ultrasonic elakha i-caviling ekuxhumaneni phakathi kwamanzi nebhodlela, ke lalinamanzi ompompi, amanzi ahlanziwe nomoya ocindezelwayo, ngemuva kokuqeda ukugeza, ibhodlela lingena kwinqubo elandelayo.
Idivaysi ye-Ultrasonic eyakha i-cavitation --- kuqala yokufafaza-- yesibili yokufafaza-- yesifutho somoya esicindezelwe [yonke imishini yokuwasha yokuwasha ebusweni bangaphakathi kwebhodlela, umoya uvela esizeni somsebenzisi
Vula i-Dia Yethebula φ720
amandla okudlulisa Ivumelaniswe nomshini wokuwasha
Ukunikezwa kwamandla kagesi 220V 50HZ
Ukulinganisa Ngaphandle 750 × 1200 × 950
Amandla okukhiqiza 40-50bottle / min @ 100ml isitsha.
Ukusetshenziswa Komoya Okucindezelwe 15m3/h,0.3~0.4kg/cm2
Amanzi Ukusetshenziswa 0.6 ~ 1t / h
Ngaphandle kwesilinganiso 1380 × 900 × 1350
Umshini Wokugeza Ibhodlela Womoya Ozenzakalelayo
Kuwumshini wokugeza amabhodlela ozenzakalelayo ngomoya. umthamo uncike emzunzini wokugeza komoya.
Umshini wokucindezela umoya uthutha umoya ngaphakathi kwesitsha se-vacuum, kufakelwe igesi nge-solenoid valve ne-generator ye-ion, i-tracheal gas shampoo yaphefumula igesi emabhodleleni ngomlomo wokuwasha igesi, kwaphuma umoya wakwelinye izwe ngomlomo wokugeza ngegesi. i-back tracheal echitha imfucumfucu ingaphandle ngaphandle ngokulawulwa kokuphuma.